အမှတ်တရလေးများ: ကိုစိုးမိုးမင်းဦး + မလွင်လွင်ထွန်း (စင်္ကာပူ) တို့၏ မင်္ဂလာဦးအလှူ ကောင်းမှု ၂၄.၁၂.၂၀၁၂ တနင်္လာနေ့
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း မှ အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်းတွင် သံဃာအပါး (၄၀၀)ကျော်အား အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းများ လောင်းလှူလျှက်ရှိပါသည်။အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်းလောင်းလှူနေသော ဆွမ်းအတွက် ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင်များကိုလည်း ငွေပဒေသာပင်တစ်ခုလျှင် (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)ဖြင့် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။မွေးနေ့အလှူရှင်များ အနေနှင့် မိမိ၏ မွေးနေ့တွင် ဆွမ်းများ လောင်းလှူလိုပါက အရုဏ်ဆွမ်းအလှူအတွက်(၇၅,၀၀၀ ကျပ်)၊အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်း(၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်) =(၁၉၅,၀၀၀ ကျပ်) ဖြင့် ၁လခန့်ကြိုတင်ဆက်သွယ်ကာ ရက်ယူထားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။လေးစားစွာဖြင့်-၀ါဝါခိုင်မင်းnanwarwarmg2009@gmail.com(Ph-09 73095851)
ကိုစိုးမိုးမင်းဦး + မလွင်လွင်ထွန်း (စင်္ကာပူ) တို့၏ မင်္ဂလာဦးအလှူ ကောင်းမှု ၂၄.၁၂.၂၀၁၂ တနင်္လာနေ့
သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၆ ခုကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခု နတ်တော်လဆန်း (၁၁) ရက်၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၂ တနင်္လာနေ့အရုဏ် ကြက်သားကြာဇံဟင်းခါးဆွမ်းကပ်လှူခြင်းနှင့် နေ့ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းကုသိုလ်ရှင် ကိုစိုးမိုးမင်းဦး + မလွင်လွင်ထွန်း (စင်္ကာပူ) တို့၏ မင်္ဂလာဦးအလှူ ကောင်းမှု သံဃာတော်များ နေ့ဆွမ်းဘုန်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆွမ်းကြက်သားဟင်းရွှေဖရုံသီးချက်သရက်ချဉ်သုပ်ပါလချောင်ကြော် စသည့် ဟင်းလျာများဖြင့် လောင်းလှူပေးခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ အရုဏ်ဆွမ်းနှင့်နေ့ဆွမ်းအလှူရှင် မိသားစုအားလုံးတို့သည် သံဃာတော်များကို အရုဏ်ဆွမ်းနှင့် နေ့ဆွမ်းများ ဆပ်ကပ်လောင်းလှူရသော ကုသိုလ်ကံကောင်းမှု စေတနာတို့ကြောင့် ယနေ့ မှ စ၍ ဆွမ်းအကျိုး ငါးပါးပြည့်စုံပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် သာသနာအကျိုး၊ လောက ကောင်းကျိုးများ သယ်ပိုးဆောင်ရွက် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆွမ်းလောင်းအသင်း အဖွဲ့မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အလှူရှင်အားလုံးတို့နှင့်အတူ ကြည်ညို သဒ္ဓါပွားများ ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ။ '
ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင်အလှူရှင်များစာရင်းမှတ်တမ်းကို ဤပုံတွင် ကလစ်ပြီး ကြည့်နိုင်ကြပါသည်။
တနလာင်္အပတ်စဉ်ဆီအလှူရှင်-ဒေါ်ချို (ရွှေဘိုမြို့)လစဉ်အရုဏ်ဆွမ်းတစ်ရက်အလှူရှင်-၁.ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင်၊သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ)၂.မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး (မလေးရှား)လစဉ်အလှူငွေထည့်ဝင်ခြင်း-၁.ကိုငြိမ်းတေဇထွန်း+မခင်သန္တာ(စင်္ကာပူ)(လစဉ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ၅၀)၂.ကိုသန်းဇော်ဦး+မသီတာစိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ)(လစဉ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ၅၀)၃.ကိုမင်းသက်နောင်(မလေးရှား)(လစဉ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀)၄.ကိုဇော်ဇော် နဲ့ ညီမ ခေတ်ရတနာ (စင်္ကာပူ)(လစဉ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀)လစဉ်ဝေယျာဝစ္စအလှူရှင်-၁.ကိုမင်းထက်ကျော်ဇင်+မနန်းသန္တာအောင်၂.ကိုကြီး
ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင် အလှူရှင်များ-ဦးဇင်းဦးကောဝိဒ လက်ခံထားသောအလှူရှင်စာရင်း-၁.မေတ္တာရှင်ဆရာတော်(ရွှေပြည်သာ)(၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၂.ဦးကောဝိဒ(စစ်ကိုင်း) (၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၃.ကိုဖြိုး(ရွှေအိမ်ဖြူတယ်လီဖုန်း-မန္တလေး)(၁၀၀,၀၀၀ကျပ်)၄.ကိုဇော်သိင်္ခ (မန္တလေး) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)၅.ဦးဇော်သောင်း+ဒေါ်အေးသန်း မိသားစု (စစ်ကိုင်းမြို့) ( ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၆.ဦးကျော်ဝင်း +ဒေါ်စီလာ မိသားစု (ပြင်ဦးလွင်မြို့) ( ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၇.ရွှေလမ်းငွေလမ်းဝင်းကြည် ( ၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၈.ဦးသာဥာဏ်+ဒေါ်အေးအေးမြတ် မိသားစု(တောင်ကြီး) (၃၀,၀၀၀ ကျပ်)၉.ကာယကံမေတ္တာရှင်အဖွဲ့(မန္တလေးမြို့) (၁၉၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၀.မရွှန်းလဲ့ပြည့်(၅နှစ်)ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။(ရန်ကုန်)(၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၁.Dr.ကြည်ချိုအောင်(ရန်ကုန်) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၂.သာသာယာယာ(မန္တလေး) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၃.ရွှေမြန်မာဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းဆိုင် မိသားစု(မန္တလေးမြို့) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၄.ဦးစီကွမ်း + ဒေါ်အေးအေးသိန်း(မန္တလေး) (၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅.စိုင်းရဲခေါင် (၂၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၆.ကိုမင်းမင်းလတ်+မခင်စုဝင်း၊သား-ကျော်ထူးသွင်၊သမီး-ရွှန်းလဲ့ရည်ကြွယ် မိသားစု(မလေးရှား)(၁၂၂,၃၁၇ ကျပ်)၁၇.အလှူရှင်တစ်ဦး(မြိတ်) (၂၅,၀၀၀ ကျပ်)၁၈.ကိုဖြိုးသွင်ကျော်၊မစီစီသောင်း၊မမွန်မွန်သန့်(မန္တလေးမြို့) (၁၁၀၀၀၀ ကျပ်)၁၉. ကိုဇော်မင်းအောင် မိသားစု မင်းဘူးမြို့ (၅၀၀၀၀ ကျပ်)၂၀. ကိုဉာဏ်မျိုးထက် (UAE) + မယုယုဆွေ ၊ သား-သီဟစံ၊ သမီး-မဒ္ဒီမျိုးထက်၊ မြင်းမိုရ်ဦး မိသားစု မန္တလေးမြို့ (၅၀၀၀၀ ကျပ်) ၂၁. မိဘနှစ်ပါးအားဦးထိပ်ထား၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ (L.A) မြို့နေ မအိအိဆွေဇင်မှ (၅၀၀၀၀ ကျပ်) ၂၂. ဦးရှိန်၊ ဒေါ်ခင်နီ ၊မောင်ကျော်ဇင်ဖြိုး တို့အားရည်စူးပြီး သမီးလေး အင်ကြင်းသူ မိသားစု '' (ရန်ကုန်) မှသမီးလေးအင်ကြင်းသူ 25-09-2012 မွေးနေ့အလှူအဖြစ် (၁၅၀၀၀၀ ကျပ်) ၂၃. ကိုမောင်သက်+မဝေေ၀စိုး (မူဆယ်)မြို့မှ (၂၅၀၀၀၀ ကျပ်) -------------------------------------အလှူငွေစုစုပေါင်း= ၅,၀၄၇၃၁၇ ကျပ်------------------------------------ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း လက်ခံရရှိထားသော အလှူငွေစာရင်း-၁.Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း၊သမီးလေး-မေမြတ်နိုးခိုင် မိသားစု(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၂.Dr.မိုးကိုဦး+မ၀င်းမင်းသစ်(ဘန်ကောက်)(၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၃.ကိုအောင်မြင့်ဦး+မမေသဇင်အုန်း၊သား-Matthew မိသားစု(စင်္ကာပူ)(600SGD)(၃၈၇,၆၀၀ ကျပ်)၄.ဦးမြင့်သူ+ဒေါ်မွှေးမွှေးကြူ ၊သမီးလေး ဇင်မွန်ထက် မိသားစု(ကနေဒါ)( ၂၀၀,၂၆၀ ကျပ်)၅.ကိုကျော်သူရ (စင်္ကာပူ) (၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၆.ကိုမျိုးဦး+မခိုင်ခင်ဝင်း ၊သမီးလေး-သန့်အိနြေ္ဒဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ) အလှူငွေ( ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၇.ဦးမျိုးသိန်း နှင့် alor gajah ,malacca , malaysia မှ မြန်မာလုပ်သားများကောင်းမှူး။ ( ၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၈.ကိုဇင်လင်းဇော် + မသက်မာ (စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၉.ဒေါ်အေးအေးဝင်း အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုကောင်းမှူး။ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၀.ကိုခင်မောင်အေး+မတင်ညိုလင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) မှ ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ကိုခင်မောင်အေးမွေးနေ့အလှူ(၆၄,၅၀၀ ကျပ်)၁၁.မယွန်းရတီလှိုင် (နန်းထိုက်ဖုန်းအပိုပစ္စည်း နှင့်အရောင်းဆိုင် ၊ မလေးရှား) ( ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၂.ဦးကိုကိုနိုင် + ဒေါ်မြင့်သဲစုစံ + သားသား မောင်ဇွဲလုလင်နိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၂၀၁,၂၀၀ကျပ်)၁၃. ဦးချစ်ထွန်း + ဒေါ်အိနန်း တို့အားရည်စူး၍ မစန်းစန်းခိုင် (စင်္ကာပူ)(၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်။၁၄.ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးတင်အောင် နှင့်မိခင်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ရီတို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု(ထိုင်းနိုင်ငံ) (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ်၁၅.ကိုထွန်းထွန်း(စင်္ကာပူ) (၇၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၆.Dr.ညီညီကျော်+Dr.ဖူးပွင့်ဟန်(USA) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၇.ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည်၊သား-မင်းသစ်ထွန်း မိသားစု(ထိုင်ဝမ်) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၈.ဒေါ်ခင်မြမြ (ထိုင်း) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၉.ဒေါ်ခင်လေးကြူ (ထိုင်း) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၀.ဒေါ်ခင်လေးဖြူ (ထိုင်း) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၁.ဒေါ်ခင်လေးမူ (ထိုင်း) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၂.ဒေါ်ခင်လေးမေ (ထိုင်း)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၃.ဦးကိုကိုမောင် (ထိုင်း) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၄.Mr.Steven+Ms. Sydney ,သား-AJ , သမီး-EVA (ထိုင်း) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၅.ဦးတင်ထွန်း+ဒေါ်ညွန့်ညွန့် မိသားစု(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၆.မိဘများကိုအမှူးထား၍ မအေးမွန်သန့်(စင်္ကာပူ)၏ (၂၃.၉.၂၀၁၁ မွေးနေ့အလှူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၇.ဦးချစ်အေး+ဒေါ်တင်တင်ရီ ၊သမီး-မသန္တာဦး၊မဖြူဖြူခိုင်၊မအိအိခိုင် မိသားစု (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၈.မအေးဇာနွယ်(စင်္ကာပူ) (၁၀၀,၅၀၀ ကျပ်)၂၉.ကိုဇော်လင်းထူး+မကျော့ကေသွယ် မိသားစု(ရန်ကုန်)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၃၀.ကိုမင်းသူရိန်+မသဇင်၊သား-မင်းသန့်ကျော်(Ah Boy)၏ (၇.၉.၂၀၁၁)မွေးနေ့အလှူ (စကာင်္ပူ) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၃၁.မနိုဘယ်လ်မိုး(စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၃၂.စေတနာရှင်တစ်ဦး(90SGDx588k) ( ၅၂,၉၂၀ ကျပ်)၃၃.ဦးဂျင်မီစိုး မိသားစု (ရန်ကုန်) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၃၄.မဖြူမေဇင် (စင်္ကာပူ)၏ (၈.၁၀.၂၀၁၁)မွေးနေ့အလှူ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၃၅.ဦးဇော်မိုးဆန်း+ဒေါ်နော်နော်ရည်မွန်၊သမီး-ရှင်မိုးရည်၊သွန်းဆင့်မိုးရည် မိသားစု(အဒူဒါဘီ၊ယူအေအီး)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၃၆.Dr.ဖိုးသော်တာ၊Dr.မေရင်ရင်သန်း၊Dr.သွဲ့သွဲ့ ၊ Dr.ခင်သန်းနွယ်၊ Dr.ခင်သန်းမြင့် မိသားစု (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၃၇.ဦးခင်အောင်တင်+ဒေါ်ခင်ခင်ဦး ၊ သား-မောင်ကောင်းဆက်၊ သမီး မသက်စန္ဒီ မိသားစု (စင်္ကာပူ) ( ၁၂၄,၀၀၀ ကျပ်)၃၈.ကိုမျိုးသန့် + မမြင့်မြင့်အေး၊ သမီး မညွှန်းအိမ်စည်မျိုး (စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မည့်ကိုမျိုးသန့် ၏ မွေးနေ့အလှူ) (၆၂၀၀၀ ကျပ်)၃၉.ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း(ရွှေပြည်သာ) ၏ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၂ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော မွေးနေ့အလှူ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၀.ဦးညိုသန့် (ရွှေပြည်သာ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၁.ဒေါ်အေးအေးဝင်း (ရွှေပြည်သာ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၂.မောင်ဥာဏ်လင်းဦး (ရွှေပြည်သာ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၃.မစုလှိုင်ဦး (ရွှေပြည်သာ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၄.မ၀င်းဝင်း (ခေတ္တ-စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၅.ကိုခင်မောင်ကျော်+Dr.နေကြည်မြင့်(စင်္ကာပူ)(၂၄.၁၀.၂၀၁၁)မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၆.မိဘများကို အမှူးထား၍ မအေးအေးမျိုး(UK)(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၇.ကိုဇော်ဇော်အောင်+Dr.ဇင်မာဝေ(စင်္ကာပူ)(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၈.ကွယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်သော(ဦးမြင့်လွင်+ဒေါ်ခင်ခင်လေး)တို့အား ရည်စူး၍ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၊ဦးကျော်ကျော်ဦး၊ဦးလှိုင်ထွန်း၊ဒေါ်အေးအေးချို၊ဒေါ်သိဂီင်္လင်း၊ဒေါ်ရင်မင်းထွေး(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၄၉.ဦးကျော်မြင့်မိသားစု(၆၂,၀၀၀ ကျပ်)၅၀.ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီး ဦးကြည်ထွန်း+မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်ဆွေသိမ်း တို့အား အမှူးထား၍ သမီး-မအိအိမာ(စင်္ကာပူ)၊သား-မောင်အောင်မျိုးသိမ်း မိသားစု ကောင်းမှူး။( ၆၂,၀၀၀ ကျပ်)၅၁.မနန်ခမ်းဟန်(စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၅၂.မသန်းသန်းလှ (စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၅၃.မဇင်မာဖြူ (စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၅၄.မသီသီထွန်း (စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၅၅.မရှင်းသန့်ဖြူ (စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၅၆.ကိုကျော်ဇော +မယဉ်ဖြူမြင့် (စင်္ကာပူ) (၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်)၅၇.ဦးစောလစ်ဝှီး@ဦးကျော်စိုးလင်း+ဒေါ်ကျင်အေး မိသားစု(ရန်ကုန်)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၅၈.ကွယ်လွန်သူ ဘဘ ဦးဘိုးအေး၊မယ်မယ် ဒေါ်ကျင်ရှီ ၊ ဖေဖေ ဦးသိန်းအောင်၊ မေမေ ဒေါ်ညွှန်စိန် နှင့် ဒေါ်လေး ဒေါ်သျှမ်းသွယ်နှင့် မောင်နှမများကို ရည်စူး၍ ကိုဌေးအောင်(ဒိန်းမတ်)၏ အလှူ။(၇၆၉,၀၀၀ ကျပ်)၅၉.ဦးပြုံး+ဒေါ်သန်းတင် မိသားစု (၆၀,၅၀၀ ကျပ်)၆၀.ဦးကျော်မြင့်+ဒေါ်စန်းရီ မိသားစု(၃၀,၂၅၀ ကျပ်)၆၁.Dr.မျိုးမင်းသန့်+မမေယမင်းသူ(MD, Bright Team Decoration Co. Ltd. ရန်ကုန်)(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၆၂.ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်နှင်းအေး၊သား OSCAR (USA)(၅၀၀,၀၀ ကျပ်)၆၃.ဦးပန်းစိန်+ဒေါ်မြသိန်း မိသားစု (၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၆၄.(၂၀.၉.၂၀၁၁)နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားသော မိခင်ကြီး ဒေါ်စိန်ကျော့ အားရည်စူး၍ ဦးလှသိန်း+ဒေါ်အေးအေးမြင့် မိသားစု ( ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၆၅.ဦးသိန်းဟန်+(ဒေါ်စန်းရီ)ရည်စူးပြီး..ကိုကြီးစတိုး(နီလိုင်း)မိသားစု (မလေးရှား) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်၆၆.ကိုဇေယျဝင်း+မခိုင်ဇင်ထွန်း(သြစတေးလျ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၆၇.Mr.Koyanagi + မသင်းသင်းနိုင် ၊သား HIROAKI မိသားစု (ဂျပန်) ( ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၆၈.ကိုဆန်းမော်+မအေးမွန်ထွန်း(ဂျပန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၆၉.နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှူးထား၍ ကိုကြည်ဇော်သက်+မရွှန်းလဲ့မေ (စင်ကာပူ)- ၆၁၈၀၀ ကျပ် ၇၀.မိဘနှစ်ပါးကိုအမှူးထား၍မမေသန်းထိုက်(စင်ကာပူ)-၅၀၀၀၀ ကျပ်၇၁.ကွယ်လွန်သူ ဦးမင်းနိုင် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြူကြူခင်မိသားစု(ရန်ကုန်) ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်၇၂.ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးအေး+ဒေါ်စန်းစန်းလွင် တို့အားရည်စူး၍ ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး(စင်္ကာပူ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်+၅၀,၄၂၄ ကျပ်၇၃.ကိုစောကိုဦး+မမိုးဝေကျော်(စင်္ကာပူ) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်၇၄.ကိုမြတ်ထွန်းမျိုး+မအိချို (စင်္ကာပူ)( ၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၇၅.ကွယ်လွန်သူ အဖိုး အဖွားများအားရည်စူး၍ Mr.Lee Chia Meng+ မနှင်းဥမ္မာနိုင် (ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၇၆.ကိုဘိုဘိုဟန်+မရတနာတင် (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၇၇.ဦးကိုကိုမောင် + Dr.ဇာခြည်လဲ့ ၊သမီး-ဆုပြည်ရွှေစင်၊ဆုလဲ့ရွှေစင် မိသားစု(ရန်ကုန်) (၂၀,၀၀၀ ကျပ်)၇၈.မအေးမို့မို့ကြည် (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၇၉.နှစ်ဖက်သော မိဘများကို အမှူးထား၍ ကိုအောင်ခိုင်ကျော်+မအေးမြတ်မြတ်စိုး(စင်္ကာပူ) မှ ကိုအောင်ခိုင်ကျော် ၏ (၂၂.၂.၂၀၁၂) မွေးနေ့အလှူ (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၈၀.ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြသော ဦးသန်း+ဒေါ်အမာ၊ဦးထွန်းကြည်+ဒေါ်အုန်းမြိုင်၊ဦးသန်းတင်+ဒေါ်သန်းနွဲ့ တို့အား ရည်စူး၍ ဦးဌေးလွင်+ဒေါ်ဒန်းမြိုင်မိသားစု၏ အလှူ (၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၈၁.ကိုသီဟသက်တင်+မဇာခြည်လွင် ၊သား-ဂျေဂျေ(စင်္ကာပူ) မိသားစု မှ (၂၅.၂.၂၀၁၂)ကိုသီဟသက်တင် ၏ မွေးနေ့အလှူ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၈၂.ကိုဇော်မင်းလှိုင်+မသဇင်မြင့် ၊သမီး-သီရိဇော် (စင်္ကာပူ)မှ (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၈၃.မအေးအေးသွယ် (ဆိုက်ပရပ်စ်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၈၄.ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်နုနုရီ မိသားစု (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၈၅.ကိုမောင်မောင်မျိုးမင်း+မမိုးသူဇာ ၊သမီး-စုနေခြည်မောင်၊စုစံထားမောင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၈၆.ကိုမျိုးမင်းကြည် +မဇင်မာဝင်း ၊သား- ရှင်းခန့်မင်းကြည် ၊ပိုင်ဇင်မင်းကြည် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၈၇.ကိုဇော်ဝင်းမြင့် + မတင်ဇာပိုင် မိသားစု (250 SGD)(၁၆၀,၀၀၀ ကျပ်)၈၈.ဦးခင်အောင်တင် + ဒေါ်ခင်ခင်ဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး(၉)နှစ်ပြည့်အားရည်စူးအလှူ (၅၀၀၀၀ ကျပ်) ၈၉.ဦးအောင်သိမ်း+ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး မိသားစု (စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်) ၉၀.ကိုရန်နိုင်+မသီတာ (စင်္ကာပူ) (240 SGD)(၁၅၃၆၀၀ ကျပ် )၉၁.ဦးအောင်ရှိန်+ ဒေါ်မငယ် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၉၂.ကိုစည်သူဝင်း+ မအိမွန်ချို (စင်္ကာပူ)မှ (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၉၃.ကိုဝင်းထွဋ်အောင်+ဒေါ်သဉ္ဇာဝင်း ၊သား-ဘုန်းပြည့်စည်သူ မိသားစု(စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၉၄.မဇာခြည်မင်းမင်းထွေး(စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၉၅.Jesse Kaung Myat (Singapore) (200SGD)(၁၂၈,၀၀၀ ကျပ်)၉၆.မသီသီဟန်နှင့် သူငယ်ချင်းများ (စင်္ကာပူ) (385SGD)(၂၄၆၄၀၀ ကျပ်)၉၇.ကိုသိန်းဝင်းထွန်း + မအိအိထွန်း မိသားစု (စင်္ကာပူ) (500SGD)(၃၂၀,၀၀၀ ကျပ်)၉၈.ကိုဇော်ဝင်းထွဋ် + မနှင်းယုယုဝင်း၊သမီး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ မိသားစု(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၉၉.ကိုဇော်ဇော်ထွန်း+ မခိုင်သဉ္ဖာဝင်း ၊သား- ကျော်ဇေယျာဝင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၀၀.ကိုမျိုးမင်း +မနှင်းဖြူဖြူ ၊သား- မိုးသစ်မင်း မိသားစု (စင်္ကာပူ)(100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၀၁.ကိုကျော်မင်း +မနီလာလှိုင် ၊သမီး- မေမျိုးဟိန်း၊မေမျိုးဟန် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၀၂.ကိုစိုးဝင်းနောင် + မသန္တာလှိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၀၃.ရွှေအင်းလေးမိသားစု(၁၅၃၆၀၀ ကျပ် )၁၀၄.ကိုထိန်လင်း+ မမေသင်္ကြန်ထွန်း (စင်္ကာပူ)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၀၅.မနီနီလွင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၀၆.မိခင်ဒေါ်စောလေးအား အမှူးထား၍ သမီး မမူမူအေး မိသားစု (စင်္ကာပူ)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၀၇.ဦးတင့်လွင်မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၀၈.ဦးခိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၀၉.ဦးအောင်ကိုမြင့် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၁၀.မိခင် ဒေါ်ခင်စိန်အား အမှူးထား၍ ဒေါ်တင်မြင့်မိသားစု (စင်္ကာပူ)(80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၁၁.မိခင်ဒေါ်အောင်ကြွဖြူ(စစ်တွေ)အား အမှူးထား၍ သမီး- လှလှကြည်၊ဒေါက်တာမြင့်မြင့်သိန်း မိသားစု (စင်္ကာပူ) (300 SGD)(၁၉၂,၀၀၀ ကျပ်)၁၁၂.ကိုကျော်စွာလင်း+ မကေခိုင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၁၃.ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးအား အမှူးထား၍ Miss Sharon နှင့်မောင်နှမမိသားစုများ (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၁၄.ဦးသန်းထိုက်ဦး +ဒေါ်ကြူကြူဝင်း မိသားစု (စင်္ကာပူ)(80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၁၅.မယုယုဟန်မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၁၆.ဦးသိန်းဝင်း+ဒေါ်နီနီအေးမိသားစု (စင်္ကာပူ) (170SGD)(၁၀၈,၈၀၀ကျပ်)၁၁၇.မမြရည်ညို မိသားစု (စင်္ကာပူ) (90SGD)(၅၇,၆၀၀ ကျပ်)၁၁၈.ဦးသက်တင်+ဒေါ်သန်းမြင့် မိသားစု (Best Smile -စင်္ကာပူ) (90SGD)(၅၇,၆၀၀ ကျပ်)၁၁၉.ဦးကျော်တင့် + ဒေါ်အုန်းကြည် ၊သမီး -မချယ်ရီ မိသားစု (စင်္ကာပူ)(110SGD)(၇၀,၄၀၀ ကျပ်)၁၂၀.ဦးကျော်ခိုင်တင့် + ဒေါ်သိန်းသိန်းရှင်မိသားစု (စင်္ကာပူ)(80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၂၁.ဒေါ်အေးသန့် မိသားစု (စင်္ကာပူ)(100SGD)(၆၄,၀၀၀ကျပ်)၁၂၂.ဦးစိုးလှ +ဒေါ်အေးမြတ်မွန် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ကျပ်)၁၂၃.ဦးအောင်စိုး+ဒေါ်ခင်ထားအေး မိသားစု (စင်္ကာပူ)(100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၂၄.ဦးစိုးမိုးအောင်+ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့် ၊သမီး- အေးမြတ်စိုး မိသားစု(100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၂၅.ဦးအောင်ဇော်လင်းမိသားစု (စင်္ကာပူ) (100 SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၂၆.ဦးအေးကျော်+ဒေါ်နွယ်လေးခိုင် တို့အား အမှူးထား၍ မအေးသက်ထားနွယ်(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၂၇.ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်မာထွေး မိသားစု (စင်္ကာပူ) (90SGD)(၅၇,၆၀၀ ကျပ်)၁၂၈.နှစ်ဖက်သော မိဘများဖြစ်သောဦးစိုးလှိုင်+ဒေါ်မြသိန်း၊ဦးလိန်ဟာ+ဒေါ်ရာဟတ် တို့အားအမှူးထား၍ကိုကျော်ပိုင် +မသင်းသင်းအေး မိသားစု (စင်္ကာပူ) (100USD) (၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၂၉.ကိုဝင်းမင်း +မကျော့ကေခိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၃၀.ဦးမြစိန်+ဒေါ်လှမြင့် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၃၁.မစုမွန် ၊ မဌေးဌေးလင်း ကောင်းမှူး (စင်္ကာပူ)(80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၃၂.ကွယ်လွန်သူ ဦးလှသောင်း အားရည်စူးပြီး ဒေါ်စံပယ်အား အမှူးထား၍မသန်းသန်းဆင့် ၏အလှူ။ (စင်္ကာပူ)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၃၃.ကွယ်လွန်သူအဖွား ဒေါ်သိန်းညွန့် အားရည်စူး၍ ဦးညွန့်ရွှေ+ဒေါ်အမြိုင် ၊သမီး- မလှိုင်ဝင်းလဲ့ (စင်္ကာပူ)မှ (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၃၄.ဦးကျော်ဝင်း + ဒေါ်မာလာရီ (စင်္ကာပူ)မှ(100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၃၅.ဦးဝင်းထိန် + မမေကျော်စိုးညွန့် (စင်္ကာပူ)(500SGD)(၃၂၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၃၆.ဦးသိန်းရွှေ + ဒေါ်စန်းစန်းမိသားစု (စင်္ကာပူ) စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၈၀(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၃၇.ဦးလှသောင်း+ဒေါ်စံပယ် ၊သမီး- မသန်းသန်းတင့် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)၁၃၈.ဦးအောင်စိုးမြင့် + ဒေါ်သောင်းရီတို့အား အမှူးထား၍သားသမီးများကောင်းမှူး (စင်္ကာပူ) စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀(၃၂၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၃၉.ဦးအောင်ဇော်+ဒေါ်တင်တင်ခိုင် (စင်္ကာပူ) ( 100USD) (၈၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၄၀.ကိုစိုးမိုးမြိုင် +မနီလာသန်းထွန်း (စင်္ကာပူ) (၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၄၁.ကိုဇော်လင်းအောင် +မဇင်မာထွန်း (စင်္ကာပူ)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၄၂.ဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်း (လစဉ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ၁၀ x ၅ နှစ်အတွက်) (၃၈၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၄၃.ဦးသန်းဆွေ +ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင် ၊သား-ကျော်မျိုးဆွေ၊ဇော်မျိုးဆွေ၊စိုးမိုးဆွေမိသားစု (စင်္ကာပူ) ၁၀၂,၄၀၀ ကျပ်၁၄၄.ဦးဇော်ဝင်း+ဒေါ်စီစီ မိသားစု (စင်္ကာပူ) ၁၀၂,၄၀၀ ကျပ်၁၄၅.ဦးထွန်းညွန့်+ဒေါ်ဌေးဌေးကြည်၊သား-မင်းနိုင်ဦး၊သမီး-စုစုအောင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၄၆.ကိုကျော်သူရ + မစိုးစိုးလွင် ( U.S.A) (၈၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၄၇.ကွယ်လွန်သူ ဦးဝင်းလွင် (ခ) ဦးရေခဲ အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုကောင်းမှူး။(ကျောက်မြောင်း)(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၄၈.ကိုကျော်စွာမင်း (လွိုက်ကော်) (၁၅.၄.၂၀၁၂မွေးနေ့အလှူ)(၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၄၉.ကိုမင်းသူရိန်+မလဲ့ရည်ဝင်း၊သား-မင်းပြည့်ဖြိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၆၄,၀၀၀ ကျပ်)၁၅၀.ဦးအောင်ဌေး+ဒေါ်မြတ်နွယ် ၊သမီး-မမြတ်မျိုးအောင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(yoma)
၁၅၁.ကိုအောင်လေး+မကြည်လေး(စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅၂.ဗိုလ်ကြီးဥာဏ်ဝင်းထွန်း+မအေးသန္တာထွန်း(စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅၃.ကိုရဲမျိုးကျော်+Dr.နန်းထွေးခမ်း(စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅၄.ကိုမျိုးဝဏ္ဏဦး(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅၅.ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်အောင်မာဝေ(၁)နှစ်ပြည့်အား ရည်စူး၍ ဦးထွန်းအောင်ကျော်+ဒေါ်ခင်မာလာဝေ၊သမီး-ရွှန်းမြတ်ဆုလာဘ် မိသားစု၏အလှူ (၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅၆.Kathy Gems Art မိသားစု(Abu Dhabi, UAE) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၅၇.ကိုစိုးနိုင်ဝင်း+မလဲ့လဲ့နှင်း(ရွှေဘို) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅၈.ဦးအောင်ကိုသန့်+မနှင်းအိခိုင်(စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅၉.ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးဆွေ မိသားစု(စင်္ကာပူ)( ၆၅,၃၀၀ ကျပ်)၁၆၀.ဦးကျော်ဦး+ဒေါ်ချယ်ရီမြင့်၊သမီး-နှင်းရည်ဝင်း ၊သား-ဟိန်းသူရဇော်၏ (၆၊၄၊၂၀၁၂)(၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ (စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၆၁.ကိုသိန်းဝင်း+မမြတ်မြတ်စန်း (စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၆၂.ကွယ်လွန်သူသမီးလေး မယ်မဒီဘို အားရည်စူး၍ ကိုဇင်ဘိုဘိုစိုး+မဒါလီမြင့်ဆွေမိသားစု (စင်္ကာပူ)(၆၅,၀၀၀ ကျပ်)၁၆၃.မစုငယ်ဝင်း (စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၆၄.ဦးကျော်ခိုင်+ဒေါ်ခင်ဝင်းသန့် (၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၆၅.ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးအေးသောင်းအားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးမြင့်(ကွမ်းခြံကုန်း) မိသားစု (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၆၆.ကိုလင်းလင်းထွန်း+မရွှေဇင်မာ၊သမီးလေး-ဖြူစင်မင်း မိသားစု(၂၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၆၇.ဦးမျိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်ခင်ကြူမိသားစု(မြိတ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၆၈.ဦးခက်ဂွမ်+ဒေါ်အင်ကြူမိသားစု(မြိတ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၆၉.ကိုမျိုးမင်းသိန်း+မဖြိုးမင်းဦး(စင်္ကာပူ) (၆၅,၀၀၀ ကျပ်)၁၇၀.ကိုသန့်ဇင်+မကျင်ကျင်လင်း(စင်္ကာပူ)တို့၏သားလေး-လင်းသန့်ပိုင်၏ ၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ(၃၀.၄.၂၀၁၂) S$(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၇၁.ဖြူစင်သဒ္ဓါအဖွဲ့(စင်္ကာပူ) (၁၈၅,၀၀၀ ကျပ်)၁၇၂.ကိုမြင့်ဇော်+မအေးသန္တာမင်း၊သား-မင်းသုတဇော် မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ မအေးသန္တာမင်းမွေးနေ့အလှူ (၆၅,၀၀၀ ကျပ်)၁၇၃.ကိုမျိုးသန့်စိုး+မအေးသန္တာဖြိုး(စင်္ကာပူ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၇၄.ဦးစိန်ဘောဂ+ဒေါ်နီနီထွန်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) ၆၅,၀၀၀ ကျပ်၁၇၅.မအေးမြတ်သူ (စင်္ကာပူ) ၆၅,၀၀၀ ကျပ်၁၇၆.မနွယ်နီကျော် (စင်္ကာပူ) ၃၂,၅၀၀ ကျပ်၁၇၇.မမြမြင်ကြည် မိသားစု (စင်္ကာပူ) ၇၁,၅၀၀ ကျပ်၁၇၈.မအေးစုခိုင် (စင်္ကာပူ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၇၉.ဂျပန်နိုင်ငံ၊နာဂအိုကာရောက်မြန်မာမိသားစု၊ ကျောင်းသား/သူများကောင်းမှူ။ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင်(၈)ခုအတွက် အလှူငွေ (၄၀,၀၀၀ ယန်း)၁၈၀.ကိုကုဋေဖြိုးအောင် + မကေခိုင်ချို မိသားစု (ဂျပန်နိုင်ငံ) မှ ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် ၂ခုအတွက် အလှူငွေ (၁၀,၀၀၀ ယန်း)(YN)၁၈၁.ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြသော ဒေါ်တင်သန်း၊ဒေါ်စုစုကျော်တို့အား ရည်စူး၍ ဦးသန်းစိန်နှင့် သမီး-ဒေါ်ဆွေဇင်သန်းစိန်၊ဒေါ်မေဇင်သန်းစိန် (စင်္ကာပူ)မှ အလှူငွေ ၂၀၀,၀၀၀ကျပ်၁၈၂.ဦးသန်းလွင်ဦး+ဒေါ်ခင်ဌေးလှစိုး မိသားစု (၆၅,၀၀၀ကျပ်)၁၈၃.ကိုဇော်မင်းထွန်း(မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၈၄.ဦးတင်ထူး+ဒေါ်စန်းစန်းဦး၊သား-မောင်မျိုးခင်၊မောင်ဝေဖြိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်၁၈၅.ကိုဇော်သန့်အောင်(မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း ၊စင်္ကာပူ) (၅၁,၈၇၀ ကျပ်)(22/6)၁၈၆.ကိုအောင်ကျော်မိုး+မဇင်ဌေးဦး၊ သမီး-အေးခိုင်ခိုင်ကျော် မိသားစု(စင်္ကာပူ)(၁၀၃,၇၄၀ ကျပ်)(22/6)၁၈၇.ကိုထင်အောင်စိုး+မလဲ့လဲ့ဝင်း(စင်္ကာပူ)(၃၉၉,၀၀၀ ကျပ်) (22/6)၁၈၈.ကိုနိုင်မင်းသန်း+မယမင်းသန့် မိသားစု(ဂျပန်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၈၉.ဂျပန်ရောက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၉၀.ကိုဖြိုးကြိုင် + မခင်မာချို ၊သား-မြတ်ဟိန်းစံ၊သမီး-မေမျက်ချယ် မိသားစု(ဆင်မင်းလမ်း၊အလုံ) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်၁၉၁.ကိုလှမိုးဦးဆောင်သော ဆစ်ဒနီအလှူရှင်များအဖွဲ့ (ဆစ်ဒနီမြို့) ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်၁၉၂.နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးသန်းလွင်+ဒေါ်လှလှယဉ် မိသားစု(စင်္ကာပူ)(၃၃,၂၅၀ ကျပ်)(22/6)၁၉၃.ဦးဝင်းဖေမိသားစု(စင်္ကာပူ) (၃၃,၂၅၀ ကျပ်)(22/6)၁၉၄.ဦးအောင်သန်း+ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်တို့အား အမှူးထား၍ ကိုသိန်းမင်း+မအိအိအောင်(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(30/5)၁၉၅.မသက်နန္ဒာ (U.S.A) (၁၀၅,၀၇၅ ကျပ်) (22/6)၁၉၆.မအေးသီတာ (စင်္ကာပူ) (၅၃,၂၀၀ ကျပ်) (22/6)၁၉၇.မအေးမြကြူမိသားစု (ထိုင်ဝမ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2/6)၁၉၈.ဦးချင်းစိန် +ဒေါ်ခင်မြင့်ရီ မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2/6)၁၉၉.ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2/6)၂၀၀.ဦးအောင်ထွန်း+ဒေါ်နွယ်နီစိန် ၊သား-မောင်ဥက္ကာကျော်(ထိုင်ဝမ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2/6)၂၀၁.မနန်းဇာခြည်လတ်(စင်္ကာပူ)(၆၆,၅၀၀ ကျပ်) (22/6)၂၀၂.ဦးအောင်ထွန်းလှိုင်+ဒေါ်စံအောင်ခိုင် တို့အားအမှူးထား၍ သမီး-မနွယ်နွယ်သိန်း(စင်္ကာပူ)(၆၆,၅၀၀ ကျပ်) (22/6)၂၀၃.ကိုထွန်းမြင့်အောင်+မဆုဝေဖြိုး(စင်္ကာပူ)(၅၁၈၇၀ ကျပ်) (22/6)၂၀၄.ဦးသောင်းမြင့်+ဒေါ်ခင်မြင့်မိသားစု(စင်္ကာပူ)(၅၃,၂၀၀ကျပ်) (22/6)၂၀၅.ဦးစောထွန်း(စင်္ကာပူ)(၅၃,၂၀၀ကျပ်) (22/6)၂၀၆.မတင်နန္ဒာထွန်း(စင်္ကာပူ) (၅၃,၂၀၀ကျပ်) (22/6)၂၀၇.မတိုးတိုးလွင်(စင်္ကာပူ)(၅၃,၂၀၀ကျပ်) (22/6)၂၀၈.ဇွန်လ မေတ္တာရှင်ဆရာတော်တရားပွဲမှ ရရှိသော ရာသက်ပန်ဆွမ်းအလှူငွေစုစုပေါင်း(S$1958အတွက်) ၁,၂၇၂,၇၀၀ ကျပ်(12/6)၂၀၉.ဒေါ်မေစုကောင်း မိသားစု(ရန်ကုန်) ၂၀,၀၀၀ ကျပ် (22/6)
၂၁၀..ကွယ်လွန်သူဦးလေး ဦးစံမောင်အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ တူ၊တူမများ၏ အလှူ (150 SGDx 678 Kyats=101700 Kyats) (5/7)၂၁၁.ဦးကျော်နိုင်+ဒေါ်တင်အောင်မိသားစု(တောင်ဥက္ကလာ)(80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၁၂.ဦးမောင်ငယ်+ဒေါ်မူမူအောင်၊သမီး-နီလာအေး မိသားစု(စင်္ကာပူ)(80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၁၃.ကိုခိုင်မင်းဇော်+မခင်နီလာထွန်း၊သမီး-ကြယ်စင်ခိုင်မင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၁၄.မအေးမြသီတာလွင်(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၁၅.ကိုလင်းနိုင်+မစုစုဖြိုး၊သား-မောင်ဥာဏ်ဟိန်းထက် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၁၆.ကိုလင်း(စင်္ကာပူ) (50SGDx 678 Kyats=33900 Kyats) (5/7)၂၁၇.ကိုသန့်ဇော်+မသိန်းသိန်းမော်၊သား-လွင်သန့်မောင်၊သမီး-နှင်းသန့်သော်တာ မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ(၇နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ်အလှူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၁၈.ကိုစည်သူသိန်း+မမိုးသန္တာဝင်း၊သမီး-ယွန်းအလိမ္မာမိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၁၉.မမြသဲဖြူ+ မလဲ့လဲ့ခိုင်(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၂၀.ဦးသိန်းဌေး+ဒေါ်ရှုတင်မိသားစု(စင်္ကာပူ)(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၂၁.ကိုဝိမုတ္တိသုခ (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၂၂.ကိုကျော်စိုးမိုး+မယုဇနထွန်း (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၂၃.မသိမ့်သိမ့်မျိုး (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၂၄.ကိုတင်အောင်ထွန်း(စင်္ကာပူ) (50 SGDx 678 Kyats=33900 Kyats) (5/7)၂၂၅.ကိုစံထွန်း(စင်္ကာပူ) (100SGDx 678 Kyats=67800 Kyats) (5/7)၂၂၆.မအိအိမွန် (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats)၂၂၇.ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး ဒေါ်မြ၀င်းအားရည်စူး၍ သမီး-ဇာခြည်မင်းမင်းထွေး (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၂၈.ဦးမြင့်သိမ်း+(ဒေါ်လှသိမ်း) မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၂၉.ကိုဌေးဝင်း+ မမျိုးသီရိသိမ်း မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)၂၃၀.ဦးမောင်မောင်သန်း+ဒေါ်ဥမ္မာဟိန်း၊သား-မောင်ဥဂ္ဂါမင်း မိသားစု(ပါရမီ၊ရန်ကုန်) ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (8/7)၂၃၁.Dr.ဒေါ်ခင်အေးမူ+ဒေါ်မိမိတင်မိသားစု(ရန်ကုန်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(14/7)၂၃၂.မ၀ဿန်ဦး(စင်္ကာပူ) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (18/7)၂၃၃.ဦးထွန်းသိန်း+ဒေါ်ခင်စန်းကြွယ်၊သမီး-မအိအိစန်းသိန်း မိသားစု။၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်(21/7)၂၂၄.ဦးခင်မောင်+ဒေါ်ရင်မေမိသားစု- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(24/7)၂၂၅.ဦးသိန်း+ဒေါ်ကြင်အေး မိသားစု - ၁၀၀၀၀ ကျပ် (24/7)၂၂၆.မစုမော်ဝင်းသော်(အင်းစိန်) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (27/7)၂၂၇.ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမွန်ထွန်းရင် နှင့် မိခင်ကြီး ဒေါ်ငွေကျင်အား ရည်စူး၍ သား-ကိုမွန်မောင်အေး+မမြင့်မြင့်ဆွေ မိသားစု(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၂၈.မမိုးမခမေ၏ ဖခင် ဦးကြည်စိုး၏(၆၃နှစ်ပြည့်)မွေးနေ့အလှူ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (၂၉.၈.၂၀၁၂မွေးနေ့)၂၂၉.ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ခမည်းတော်ကြီးဦးကျော်လှိုင်+မယ်တော်ကြီးဒေါ်ပွဲရင် တို့အားရည်စူး၍ အရှင်ဇနက(အဂါင်္မောင်) သန္တိသုခကျောင်း(လန်ဒန်တက္ကသိုလ်) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်၂၃၀.ကွယ်လွန်သူသမီးလေးမယ်မဒီဘို(၄)လပြည့်အား ရည်စူး၍ ကိုဇင်ဘိုဘိုစိုး+မဒါလီမြင့်ဆွေ(စင်္ကာပူ) (100 SGDx687)(၆၈၇၀၀ ကျပ်) (30/7)၂၃၁.ဦးထွန်းအောင်ကျော်+ဒေါ်ခင်မာလာဝေ၊သမီး-ရွှန်းမြတ်ဆုလာဘ် မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ ဒေါ်ခင်မာလာဝေ၏(၂၇.၇.၂၀၁၂) မွေးနေ့အလှူ။(150 SGDx687) (၁၀၃၀၅၀ ကျပ်)(30/7)၂၃၂.မတင်တင်အောင်(စင်္ကာပူ)(200 SGDx687)(၁၃၇၄၀၀ ကျပ်)(30/7)၂၃၃.ကိုဦး+Dr.ကျင်ကျင်မေ(စင်္ကာပူ)(300 SGDx687)(၂၀၆၁၀၀ကျပ်)၂၃၄.ကိုဒဲရယ်+မနန်း(စင်္ကာပူ)(73SGDx687)(၅၀၁၅၁ကျပ်)-------၂၃၅.ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း+ဒေါ်ခင်အေးမူ(ပုသိမ်)(၁၀၀၀၀၀ ကျပ်)(16/8)၂၃၆.ကိုရန်နိုင်ချစ် + မသိန်းသိန်းဝင်း ၊ သမီးဦး တာရာလင်းလက်အောင် မိသားစု (စင်ကာပူ) (၁၉.၈.၂၀၁၂) မွေးနေ့အလှူ (၅၀၀၀၀ ကျပ်)------------------------------------------စုစုပေါင်း =၂၃,၂၂၀,၅၂၆ ကျပ် (၁၄/၈/၂၀၁၂)------------------------------------------
၂၃၇.ဦးအေးသန်း+ဒေါ်လှကြိုင်မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၁၀၀၀၀၀ ကျပ်)(15/8)၂၃၈.ဦးအေးကျော်+ဒေါ်သန်းသန်းဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ)(၁၀၀၀၀၀ ကျပ်)(15/8)၂၃၉.ကိုမြင့်အောင်+မသီတာအောင်၊သား-ရဲရင့်ဘုန်းမြင့်မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၆၈၈၀၀ ကျပ်)(15/8)၂၄၀.ကိုသန်းဇော်ဦး+မသီတာစိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၁၀၀၀၀၀ ကျပ်)(15/8)၂၄၁.ကိုကျော်ကျော်မိုး+မနှင်းဝေေ၀ဖြိုး(ရန်ကုန်)(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)(22/8)၂၄၂.ကိုကျော်ဇေယျ+မဇင်သူထက်(ဂျပန်)မှ ကိုကျော်ဇေယျ၏မွေးနေ့အလှူ ( ၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(24/8)၂၄၃.မနီနီဝင်း(တိုကျို) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (24/8)၂၄၄.ကိုစိုးထိုက်+မမာမာထွေး(စင်္ကာပူ)တို့၏ ၁၂ နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အလှူ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (25/8)၂၄၆.ကိုမြင့်ဌေး+မတင်ဇာနီကျော်(စင်္ကာပူ)မှ မတင်ဇာနီကျော်၏ မွေးနေ့အလှူ ( ၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၄၇.ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်မျိုးသက် မိသားစု(လွှမ်းမိုးသူ ကုပ္မဏီလိမိတက်) (၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်)(6/9)၂၄၈.ကိုဇေယျာနိုင်+မဇင်မာလတ်၊သမီး-မမေမြင့်မြတ်သွေးမိသားစု(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (KBZ)၂၄၉.မအေးနန္ဒာကျော်(တိုကျို) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(10/9)၂၅၀.မဇင်မြတ်စိုး(တိုကျို) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(10/9)၂၅၁.မနွေးနွေးထွေး(စင်္ကာပူ) (၁၀၀,၃၀၂ကျပ်)(16/9)၂၅၂.ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးကြည်ဟုတ် နှင့် မိခင် ဒေါ်သန်းထွန်းတို့အား အမှူးထား၍ သမီး-မမျိုးနေဇာ(ရန်ကုန်)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၅၃.ကိုသန်းထိုက်စိုး(ဂျပန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၅၄.ကိုကျော်လင်း+မမွန်မွန်စိုး၊သားသား-အောင်သူရိန်ထွဋ်မိသားစု(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၅၅.ဦးချစ်သောင်း+ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်(စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(5/10)၂၅၆.မပန်းအိမျိုး(Australia)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(5/10)၂၅၇.ဦးကျော်ကျော်ထွန်း+ဒေါ်သင်းသင်းနွယ်(စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(5/10)၂၅၈.မိခင်ဒေါ်တင်တင်ထွေး၏ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် မပန်းမြတ်မြတ်+မအေးမြတ်သီတာအောင် (စင်္ကာပူ)(၆၇,၅၀၀ ကျပ်)(5/10)၂၅၉.မသဉ္ဇာမျိုးမြင့် (စင်္ကာပူ)(၃၃,၇၅၀ ကျပ်)(5/10)၂၆၀.ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမြင့်လွင်@ဦးတင်ထွဋ်အားရည်စူး၍ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေမိသားစု (စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (5/10)၂၆၁.မိခင်ဒေါ်တင်တင်ချစ်အားအမှူးထား၍ သား-ကိုထိန်လင်းအောင်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(5/10)၂၆၂.မထက်ထက်လှ(စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(13/10)၂၆၃.ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ဦးမြင့်အောင်အားရည်စူးပြီး သမီးမဖြူလေး မိသားစု(မလေးရှား)(၅၄,၀၀၀ ကျပ်)(14/10 )၂၆၄.ကိုတိုးလေး(ထိုင်း) ၅၃,၀၀၀ ကျပ် (25/10)၂၆၅.မယမင်းဦး(စင်္ကာပူ)(၆၈၅၀၀ ကျပ်) (3/11)၂၆၆.ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းအောင်ကျော်အား အမှူးထား၍ ဦးကိုကိုနှင့် မောင်နှမတစ်စု (၅၁၃၇၅ ကျပ်)(3/11)၂၆၇.ဦးဝင်ဇော်မောင်+ဒေါ်လှလှဌေး မိသားစု(မ/ဒဂုံ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၆၈.ကိုကိုထွေး+မညိုညိုစိုး၊သမီး-စန္ဒီစိုးမြင့် မိသားစု(USA)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(4/12)၂၆၉.မိခင်ဒေါ်ခင်ခင်စု၏(၆၆)နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကိုအေးမင်းခိုင်+မအိအိလတ်(စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၇၀.မိခင်ဒေါ်နွဲ့မေ၏ (၆၃)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကိုအေးမင်းခိုင်+မအိအိလတ်(စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၇၁.ကိုကြည်စိုး+မရီရီသိုက်(စင်္ကာပူ)မှ နိုဝင်ဘာ(၁၉)မင်္ဂလာဦး အထိမ်းအမှတ်အလှူ (၆၈,၈၀၀ ကျပ်)၂၇၂.ဒေါ်စန်းစန်းမြတ်(စင်္ကာပူ)မိသားစုမှ ဒေါ်စန်းစန်းမြတ်၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အလှူ။( ၆၈,၈၀၀ ကျပ်)(4/12)၂၇၃.မမင်းမင်းခိုင်(စင်္ကာပူ) (၁၀၃,၀၀၀ ကျပ်)(4/12)၂၇၄.မနန္ဒီနဲ့သူငယ်ချင်းများ (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)(4/12)၂၇၅.ဦးရွှေမြင့်+ဒေါ်မြတ်မြတ်ထွေးမိသားစု(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၇၆.မညိမ့်ညိမ့်ကလျာ(ဆိုက်ပရပ်စ်)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၇၇.ကိုကျော်လင်း+မမွန်မွန်စိုး၊သားသား-မောင်အောင်သူရိန်ထွဋ်မိသားစု(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၇၈.၁၉-၁-၁၃ နေ့ မှာကျရောက်တဲ့ ခင်မြဝင်းမွေးနေ့ အလှူအတွက်မောင်နန္ဒ +မခင်မြဝင်းမိသားစုကောင်းမှု။ (ဂျပန်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၇၉.ဦးမြင့်ခိုင်+ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး တို့အားအမှူးထား၍ မောင်စိုးသူအောင်(UK)၏ မွေးနေ့အလှူ။ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)၂၈၀.မမိုးစန္ဒာဝင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၈၁.ကိုဇင်ဘိုဘိုစိုး+မဒါလီမြင့်ဆွေ(စင်္ကာပူ)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၈၂.ကိုသားထွေး(စင်္ကာပူ) (၅၅,၂၀၀ ကျပ်)၂၈၃.ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်တင်မာမြင့်(DORA) အားရည်စူး၍ ဦးခင်မောင်ကြူ နှင့် သမီး- သိမ့်သော်တာထက်(SARA) (စင်္ကာပူ) (၅၀,၃၇၀ ကျပ်)၂၈၄.ကိုဆန်းလွင်ထူး+မထိုက်ထိုက်ကို၊သမီး-ဖူးဝင့်ဝင့်လင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၆၉,၂၀၀ ကျပ်)၂၈၅.ကိုလွင်မျိုး(မလေးရှား) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၈၆.ဦးကျော်အေး+ဒေါ်သန်းမြ(ရွှေဘိုမြို့)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၈၉.Dr.တင်မာနွဲ့(မိတ္တီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၉၀.မဇာကြည်အေး(စင်္ကာပူ)(100S$) - ၆၉,၅၀၀ ကျပ်(17/1)၂၉၁.ကိုဇေယျာမျိုး+မနှင်းယုဝင်း(စင်္ကာပူ)(73S$)-၅၀,၇၃၅ ကျပ်(23/1)၂၉၂.ဦးအောင်စိန်ကီး+ဒေါ်စောအေး(စင်္ကာပူ)(80S$)-၅၄,၅၆၀ ကျပ်၂၉၃.ဖိုးဖိုးဦးတင်ထွန်း+ဖွားဖွားဒေါ်ခင်နွယ်(လှိုင်သာယာ)နှင့် မိဘနှစ်ပါးအား အမှုထား၍ မြေးလေး-ကြည်စင်ခိုင်မင်း ကောင်းမှု(80S$) - ၅၄,၆၄၀ ကျပ်၂၉၄.မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးမြရွှေ+ဒေါ်ယဉ်နု(ကျိုက္ခနာ)အား အမှူးထား၍ သား-ခိုင်မင်းဇော် ကောင်းမှု(စင်္ကာပူ)(80S$)-၅၄,၆၄၀ ကျပ်၂၉၅.ဦးသန်းထွန်း+ဒေါ်အေးအေးသိန်း အားရည်စူး၍ သား-ဇေလွင်ထွန်း(စင်္ကာပူ)ကောင်းမှု(80S$)- ၅၄,၆၄၀ ကျပ်၂၉၆.ဦးအောင်မင်း+ဒေါ်ကြည်ကြည်မော်တို့အားအမှုးထား၍ သားသမီးများကောင်းမှု(ဂျပန်)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၉၇.ကိုထွန်းနိုင်မြင့်+မသင်းသင်းနွယ်(ရန်ကုန်)-၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၉၈.ကိုအောင်မျိုးသန်းဦး+မစန္ဒာခိုင်(ရန်ကုန်)-၅၀,၀၀၀ ကျပ်၂၉၉.ဦးကံစွီး+ဒေါ်စန်းစန်းညွန့်(ရန်ကုန်)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၃၀၀.မိခင်ကြီးဒေါ်ဆန်းအားအမှူးထား၍ သမီး-Dr.ခင်သန္တာ၀င်း(ဂျပန်)၏ မွေးနေ့အလှူ- ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်၃၀၁.ဒေါ်ခင်မြ(စင်္ကာပူ)၏ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော မွေးနေ့အလှူ(143S$)- ၉၉,၈၁၄ ကျပ်(3/4)၃၀၂.မရှင်းသန့်စန္ဒီမျိုး(စင်္ကာပူ)(100S$)- ၆၉,၈၀၀ ကျပ်(3/4)၃၀၃.ကိုနန္ဒမျိုးမင်း+မဖြူအိသွယ်၊သမီးလေး-Kristle ကြယ်စင်မျိုးမင်း မိသားစု(လန်ဒန်) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်၃၀၄.ဦးအောင်မြင့်+ဒေါ်ကြည်ကြည်၊သား-Jason , သမီး- Jaimie မိသားစု(USA) -၅၀,၀၀၀ ကျပ်------------------------------------------စုစုပေါင်း =၂၇,၅၄၂,၂၅၂ ကျပ် (12/4/2013)------------------------------------------ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန်-ဦးကောဝိဒ(စစ်ကိုင်း)kovida9@gmail.com(Ph-092 110202)မ၀ါဝါခိုင်မင်း(မြန်မာ)nanwarwarmg2009@gmail.com(Ph-097 3095851)ကိုဥာဏ်အေး(စင်္ကာပူ)minlinkar21@gmail.com(Ph-81399604)ကိုဇော်မြင့်(မန္တလေး)kozawmyint.kzm@gmail.com(ph-0095991041540)ကိုရန်နိုင်(ဂျပန်)nay.naywathan@gmail.com JP Bank Account ヤン　ナイン　ウイン　(14000-49306371)Ph-080 3852 5214 (Softbank)အလွမ်းမြို့(ဥရောပ)alwanmyolay@gmail.comလေးစားစွာဖြင့်-၀ါဝါခိုင်မင်းမေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း
မေတ္တာရှင်ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(ရွှေပြည်သာ)၏ တရားတော်များကို ပုံကိုကလစ်ပြီး ဖတ်ရှု့နိုင်ကြပါသည်။
တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့ ထုံးဖြူဖြူဖွေးနေတဲ့ စေတီကလေးတစ်ဆူရှိတယ်၊
ထုံးဖြူဖြူဖွေးနေတဲ့ စေတီကလေးတစ်ဆူရှိတယ် ။ဘိုးဘွားတွေရဲ့ကြည်ညိုကိုးကွယ် ဦးခိုက်ခဲ့ရာ အင်မတန် သပ္ပါယ် လှတဲ့ စေတီဖွေးဖွေးလေးပေါ့။ တ...
ကိုသားထွေး မိသားစု(စင်္ကာပူ)၏ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူနှင့် သဒ္ဓမ္မပါလကျောင်းတိုက် ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့၏ နေ့ဆွမ်းအလှူ ၁၉.၂၀.၂၀၁၃
သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၇ ခုကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခု နယုန်လဆန်း (၁၁) ရက် ၊ ၁၉.၆.၂၀၁၃ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
အရုဏ် ကြက်သားကြာဇံဟင်းခါးဆွမ်းကပ်လှူခြင်း ကုသိုလ်ရှင်
ပန်းကောင်းမှန် ပန်တိုင်းမွှေး ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)
ဒီကလေးက မိမိရဲ့တူနဲ့ ခင်မင်မှုကို အကြောင်းပြုပြီး ကျောင်းကို မကြာမကြာရောက်...
၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလ၊ ပညာရေးထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှု
ပညာရေးအတွက် လှူဒါန်းထောက်ပံ့မှု (Education Foundation)ကို အောက်ဖော်ပြပါနေရာ(၂)ခုသို့ မကေခိုင်ကျော်မှ သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ (က) ရွှေစေတီ ဘုန်းတော်ကြီး...
ကျွန်တော် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းက ကျွန်တော်၏
ကျေးဇူးရှင် မွေးဖခင်၏ စကားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်္သာတ တက္ကသိုလ်
အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်း သံဃာအပါး(၄၀၀ ကျော်)အား အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းများဆက်ကပ်လောင်းလှူလျှက်ရှိသော မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်း ၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆ...
Myanmartube.net - Dhamma Video Channel 9
မိမိအနေနဲ့ ခုလို သူများရေးတဲ့စာကို မိမိဆိုက်မှာ မတင်ပါဟု-ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခု ဒီရက်တွေအတွင်း ကိုယ်တိုင်စာမရေးနိုင်ခဲ့၊ ကျမ်းတင်ဘို့ကိစ္စ၊ စာအု...
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း(၄) နှစ်ပြည့် ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားခြင်း-
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း(၄) နှစ်ပြည့် ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ(၆)ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး လပြည့်ဝန်းလမ်...
စကားပြောချင်တယ်။ အာခေါင်ခြစ်ပြီး အော်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုနာကျင်ကြောင်း၊ ဘယ်လောက် ကြေကွဲစရာကောင်းကြောင်း၊ အဘယ်မျှအထီးကျန်စိတ်ဓာတ်ကျကြောင်း…ဟင့်အင်း။ ဒီလိုငြီးငွေ...
ခန်းဂျီးလို့ပြောလိုက်ရင် အနည်းနဲ့အများတော့ တီဆားတို့ဖြစ်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ကမ္ဘ္ဘာပေါ်မှာ တရုတ်ပြည်အခြေခံ ခန်းဂျီးကို သုံးပြုတဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေက ထိုင်ဝမ်၊ က...
Happy Birthday Aamy Aung San Suu Kyaw
photo credit to : ခွန် ဒီးယမ် photo credit to : Burma VJ Media Network photo credit to : Ponnya Swe Wishing youaVery Happy Birthday Amay Suu. Best Wishes...
တစ်ခါက . . .
ကုလားအုပ်သားလေးက ကုလားအုပ် အမေကို မေးသတဲ့။
“ မေမေ . . . သားတို့မှာ ဘာလို့ သူများတွေထက် ကြီးတဲ့ ဘို့ကြီးတွေ ရှိနေရတာလဲ ဟင် ” သားဖြစ်သူက...
စိတ်သဘော မကျလာတိုင်း တွေ့မြင်ကရာ အရွဲ့တိုက်နေတဲ့ တောင်ကုန်း တချို့က ပြုံးလို့ ရယ်...
အမြဲစိမ်းတောအုပ်တခုထဲ ရေအခါခါ ချိုးခဲ့ဖူးတဲ့ မြစ်ကလည်း တခစ်ခစ် သဘောကျ....
ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့အတွက် အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ
ကိုသားထွေးမိသားစုမှ လှူဒါန်းသော ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့အတွက် အရုဏ်ဆွမ်း အလှူတော်ငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၁၀ ကို မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း(စင်္ကာပူ)အဖွဲ့မှ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသဖြင့် ...
*မှိုင်းပြာသော မီးခိုးကန့်လန့်ကာကြီး နောက်တွင်*
“ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ နေရအောင် ကျွန်တော်လာပါတယ်”
“ဆင်းရဲသားတွေကို တွေ့ဖို့ မခက်ပါဘူး၊ နေရာတကာမှာ ရှိပါတယ်”
Number of View: 282 စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဆရာနှင်ကျွန်မ ဆုံဆည်းမှုက စာပေကိစ္စရပ်များမှ စတည်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဆရာ့၏အမေရိကန်စကားပြောသင်တန်းတွ...
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါဗျာ...၊ ကျနော်လည်း ခြင်္သေ့ကျွန်းကလေး ကနေ ပြန်လာပြီးတဲ့နောက် ခြင်္သေ့တစ်ကောင်လိုပဲ ဂူအောင်းသွားလိုက်တာ အခုမှပဲ ဘလော့ဂ်ကို ပြန်ရောက်ဖြစ်တော့တယ...
ခံစား ရေးသီ ဖြစ်သော The Horse Whisperer
Tom Booker သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှ မွန်တာနာ (Montana) ဆိုသောကျယ်ပြန့်ပြောလှသည့် နေရာလေးတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါသည်။ သူ့အဖိုးနှင့်ဖခင်တို့က ဆိုးသွမ်းနေေ...
မနက်ဖုံးဆက်သည် စလုံးတဆယ်ပေးရသည်။ မိနစ်တော်တော်များများရပါသည် ယခုလိုခေတ်ကြီးထဲတွင် viber မသုံးချင်သော သူရှားသော်လည်းရှိသည်။ ရှိတော့ဘာဖြစ...
ဘွဲ့ အခမ်းအနားအတွက် ဆံပင်ပုံစံ
ဘွဲ့ အခမ်းအနား ဟာ လူငယ်အားလုံး ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ အေ၇းပါတဲ့ အခန်းနားတခုပါ။ အရေးပါတဲ့အခမ်းနားလေးမှာ ထူးထူးခြားခြားလေးလှနေ ဖို ...
မြန်မာပြည်သစ် မှာ ရေးခြစ်စရာ ရှာမရသေးဘူး
ဟိုတုန်းက..ရင်ခုန်သံအစစ်နဲ့ သွေးပြစ်ပြစ် ရေးခြစ် ခဲ့တဲ့ စာတွေ ကဗျာတွေ…
အခုတော့…လော်ဘီလိုလို.. ပေါ်လစီ လိုလို… လော်လည် စရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလား.....
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းပြန်မြင်နေရသူအမျိုးသမီး အမျိုးသမီးတွေ မြေပုံစာရွက်ကို မဖတ်တတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တာလား ဒါဆို ဒီသတင်းလေးဖတ်ကြည့်ပါဦး တကယ်တော့စာသားတွေ...
“Where China meets India”- The Fashion Version- Dont Sue me Ko Thant Myint U
Dear Readers, I know I had pretty much abondoned the blog due to my hectic life asaworking mother of two. But that doesnt mean I dont love you nor I stil...
အဌမအကြိမ်မြောက် အသည်းရောင်အသားဝါကာကွယ်ဆေးထိုးအလှူအတွက် အလှူရှင်မှတ်တမ်း-
အသဲရောင်အသားဝါဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးအလှူ အတွက် လစဉ်(၆,၅၀၀ကျပ်) ပါဝင်လှူဒါန်းကြပါသော အလှူရှင်မှတ်တမ်း- (၉.ဇွန်လအတွက်)
၁.မလင်းလင်းအေး (ရန်ကုန်) (ကလေး၂၀ဦး×၃၀၀...
ကျနော် စာရေးမယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ၂၀၁၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က သွားထားတဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုကို သွားသတိရမိတယ်။ သည်ခရီးကို သွားဖို့ အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျ...
လွန်ခဲ့သော နှစ် သန်းပေါင်း၁သောင်း၃ထောင်
မဟာပေါက်ကွဲမှုသီဝရီ စကြ၀ဠာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ထဲကမှ
ဂြိုလ်ကြီး ဂြိုလ်ငယ် ဂြိုလ်သိမ် ဂြိုလ်မွှာ...
It was on 26th December, 2012, around 3am early morning when we arrived at Magway City, Myanmar. It was like freezing in the bones while riding on it that...
*ကျွန်မနာမည် မပျော်ရွှင်သူကြီး လို့ ခေါ်ပါတယ်*
အရောင်တွေ တလက်လက်ထနေတဲ့ ကွန်ပြူတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ ခုန်ကူးရင်း သိလုိုက်ရတဲ့ အချက်အလက်တွေ...
အနောက်ယွန်းယွန်းဆီက တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ မေးတင်နေတဲ့ နေဝန်းနီနီကို မြင်မိတဲ့အခိုက် ကျွန်တော့်ဘယ်ဘက်ရင်ခွင်ဆီမှာတော့ တဆစ်ဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲလာသယောင်....။...
မင်းကို ပြုဖို့ ရှိစုမဲ့စု စုထားတဲ့
The spirits of holiday is coming to an end! This is fine, even acceptable, but the very thought of going back to normal life is still aching for some of...
* အရောင်းစင်တာ နှင့် သူ၏မာယာများ*
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အရောင်းပြခန်းတွေ၊ စတိုးဆိုင်တွေ၊ စူပါမားကတ်တွေမှာ ဈေးဝယ်ထွက်ရင် ကိုယ်ဖြုန်းချင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏကို ...
အိပ်မက်ရွက်လှေ - သီရိဆွေ
အလှဆုံးနေ့.. အတည်ပြုခဲ့.. ကြည်နူးဖွယ်.. သူ့ရဲ့ဘေး..
အသာဆုံးလ.. ပင်လယ်ထဲကျ.. အလှဆုံးည.. ရွက်လွှင့်ခြင်း..
တစ်ခါက လယ်ပိုင်ရှင် တစ်ယောက် နဲ့ သူ့ဆီမှာ သူရင်းငှား လုပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ လယ်ပိုင်ရှင်က ထုံးစံအတိုင်း သူရင်းငှားကို အစားအစာပါ ကျွေးမွေးထောက်ပံ့ရတာေ...
"""""' စိတ်ကူးကိုကျော်ပြီးမှ မြို့ရောက်နိုင်တယ် "
စိတ်ကူးထားတဲ့ အနာဂတ်ကို ထိုင်ကြည့်ဖို့အတွက်
Tara miilu sent youamessage on FanBox...
Tara miilu sent youamessage. Subject: We Miss You "Good Morning Stonecold,
Hey come on back to FanBox we miss ya. Did you know that FanBox is now off...
Photo Credit: Kaung Htet, The Myanmar Times
နှစ်သစ်ကူးခါနီး ဆောင်းမနက်ခင်းမှာ အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးတဲ့ ကြောက်လန့်စရာ သဘာဝဘေးဆိုးတခု ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်လာမ...
ရွှေတိဂုံ အမေ-ထူးအိမ်သင် မ-sample တိတ်တခိုးအချစ်-ရိန်မိုး မ-ပူစူး မင်းကိုသတိရရင် တွဲဖက်အပြုံး-ရိန်မိုး အရမ်းပဲချစ်နေပြီ-ရိန်မိုး လေပြေ ဆု အမေတခုသားတခု အရမ...
နားလည်ခွင့်တတ်သော ---------------- မောင်
ကျမ ဘ၀မှာ တွေ့ဖူးကြုံဖူးခဲ့သမျှ ကျမကို ချစ်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ကျမကိုယ်တိုင်တောင် အတုယူချင်စိတ်ဖြစ်ရ တဲ့ စံနမူနာ အချစ်မျိုးကတော့ ကျမရဲ့ မောင်ကြီး … တဖြေးဖြေးနဲ့...
ခုတလောမှာ အတွေးတစ်ခု ကို ချဲ့ ထွင်ပြီးတွေးမိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာတွေးမိနေသလဲဆိုတာလေး တင်ပြ ချင်စိတ်ကလေး ဖြစ်လာတာနဲ့ဒီဆောင်းပါးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တ...
ကျွန်တော့်အသက် ၂ နှစ်ခွဲကစလို့ ၅ နှစ်လောက်အထိ သရဲဆိုတဲ့အကောင်ကို ကြောက်စရာလို့ မထင်ခဲ့ပါ။ အကြောင်းရင်းကတော့ သရဲထက် ကျွန်တော်က ပိုကြောက်စရာကောင်းလို့ ထင်ပါသ...
စည်းကမ်းဆိုတဲ့ မြစ်ကြီးထဲမှာ ပြည်သူတွေဟာ မျောပါကြရတယ်..
စည်းကမ်းရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာနေရင် အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စည်းကမ်းမြစ်ထဲမှာ မျောပါပြီး လူတွေဟာ စည်းကမ်းရှိ...
အကွေးရီးယစ် (ကုမ်ရာသီ) အမျိုးသမီးတွေ အကြောင်း ဒါနဲ့ပါဆို ၂ခါရှိပြီထင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းသာ မက၊ နေ၊ လ၊ နက္ခတ်တွေအကြောင်း လေ့လာပြီး ငြီးငေ...
အခုတလော ပျင်းတာတွေများနေတယ်… စာရေးရမှာ ပျင်း… စာဖတ်ရမှာ ပျင်း… အိမ်ရှင်းရမှာ ပျင်း… အိပ်ရာထရမှာ ပျင်း… အလုပ်သွားရမှာ ပျင်း… ပျင်းပုံ ပျင်းနည်း အစုံအလင်နဲ့...
အဘိုးအို၊ ကျနော်နဲ့ စပ်ပနာပေါင်းစုံ
"ဘကြီးရေ... အမေ့ကို ညတုန်းက သမီးအိပ်မက် မက်တယ်"
"အိပ်မက်ထဲမှာ အမေက မဆုံးသေးဘူးတဲ့။ အဖေနဲ့အတူတူ ရှိနေတာလေ။ အဲဒါ တစ်နေ့မှာ အဖေက ကာ...
(၁) ခြေလှမ်းတွေ…… မှောင်နဲ့မဲမဲညမှာ သူ့ပိုက်ကွန်ထဲ ငြိမှာထက် တစ်ခြားဘာကိုမှ တွေးမကြောက်နိူင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရ။ အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုထဲနဲ့ ဝေးသထက်ဝေးရာေ...
ညနေ ၅နာရီ၁၀မိနစ် အချိန်မှာတော့ နေ့စဉ်ပုံမှန်အတိုင်း ချည်မျှင်ဌာန၊ ယက္ကန်းဌာန၊ ဆေးဆိုးဌာန၊ ဘွိုင်လာနဲ့ လျှပ်စစ်ဌာန အသီးသီးမှာ တာဝန်ကိုယ်စီ ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ က...
Migration to WordPress.com
Hi everyone! I don’t know if the readers still notice this post though. :p Finally, I’ve been migrating TKE blog intoaWordPress.com site. Technically spe...
သင်ဟာ တစုံတခုသို့ မဟုတ် တခုထက်ပိုသောအရာများကို ငယ်ငယ်လေးထဲက မနှစ်မြို့့ဖြစ်ဖူးခဲ့ပြီး နောက် အရွယ်ရောက်လာလို့ ထိုအရာတွေကို မနှစ်မြို့ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရ...
ဒီကိစ္စက စဉ်းစားကြည့်ရင် ရယ်စရာတော့တော်တော်ကောင်းသား စာတွေ ကဗျာတွေဖတ်ဖူးတဲ့ထဲမှာတော့ မနက်မနက်ဆို တေးငှက်ဆိုသံလေးတွေနဲ့ နိုးထရတယ်ပေါ့ ကိုယ်လည်း အ...
*အိမ်လေးရဲ့ ညနေခင်းမှာ မြင်ရမယ့် မြင်ကွင်းလေးပါ၊* အိမ်ကလေး တည်ဆောက်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့တာ နှစ်နဲ့ ချည်ပြီး ကြာခဲ့ပါတယ်၊ ပေ(၇၀ x ၆၀) အကျယ် မြေကွက်လေးထဲမှ...
ဒီနေ့ရာသီဥတုက အတော်သာယာနေသည်။ နေမပူမိုးမရွာ အေးချမ်းတဲ့နေ့လည်ခင်းမို့ ကျူရှင်အပြီး အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ရတာ အခါတိုင်းနေ့တွေထက် ပိုလို့စိတ်ထဲဘဝင်ကျနေမိသည...
I'm alive and baaaack from my 5-month long hiatus (long and tiring story...) and I can't contain my excitement on getting back to blogging and reading my ...
ဒါကိုတော့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်က အပေါင်းလက္ခဏာ အပြောင်းအလဲအဖြစ် မသတ်မှတ်ချင်ပါ။
ဒီနှစ် ဗြောက်အိုးဖောက်သံတွေက အရင့်အရင်နှစ်တွေကထက် နားကွဲလုမတတ်၊ လန့်ခုန...
I feel late winter is good to go out. My weekly pay as you go Oyster makes me free to go anyway in Zone 1 to 3. Today' destination was the natural hist...
လေထဲမှာ အိမ်မက်တွေကို လိုက်ဖမ်းကြည့်တယ်
ခပ်ရေးရေး အတွေးတွေကို ပုံဆွဲကြည့်တယ်
ကျွန်တော် ကိုပခန်း ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ဇန်န၀ါရီ ၆ ၂၀၁၃ နံနက် ၇ နာရီ အချိန် ပခုက္ကူမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၉...
Hi good morning to all of you. My voice isabit...
တခါက ဖေဖေခြင်က သားခြင်လေး ပထမဆုံး ပျံသန်းမှုခရီးရဲ့ ရင်ခုန်သံစဉ်ကို မေးခဲ့သတဲ့..။
ဒီတော့ သားလေးက စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်သံနှင့် ဒီလိုပြန်ပြောခဲ့တယ်..
*တို့ ဗမာ *
* **ဇာတိမာန် *
*ဇာတိမာန် - ဥသြဘသောင်း *
ဓမ္မရံသီမဂ္ဂဇင်း အမှတ်စဉ် ၁၅၀ တွင် ဆရာမောင်အေးနှစ် (ပညာရေး)၏ အမွေပေးပါ ဟူသော ဆောင်းပါးအဟောင်းလေးကို အမှတ်မထင်ဖတ်မိလိုက်ရတဲ့အခါ...ဒီပိုစ့်လေးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ...
"ကမ္ဘာဟောင်းက ဆုတောင်း... "
မနေ့ ကရဲ့ အလွန်မှာ... မနက်ဖြန်အတွက်စိတ်ကူးတွေ ပျောက်ရှခဲ့တယ်...
ဒါပေမယ့် ငါ့နေ့ ရက်တွေ ရှင်သန်နေတုန်းပဲ အာဒံ...
မင်း ဘယ်လိုမှ ဖတ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
သီရိဂေဟာ နှင့် တပတ်စာ
သူ့အချစ်က ဘယ်လိုလဲ... သင်ကရော...
မောင်လေး ၊ညီမလေးတို့ရေ မမပုံပြောပြမယ်နော်.. အဲ ဟုတ်ပါဘူး.. အဟတ်. :P ဒီနေ့မောင်လေးyaryar ထံမှ Forward mail လေးပို့လာတာနဲ့ မောင်လေး ၊ညီမလေး...
မင်္ဂလာပါရှင်- မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားလေးတွေတက်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ အိမ်မှာ မင်္ဂလာဖိတ်စာတွေ မကြာခဏ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကို ...
မန္တလေးတိုင်း ၊တံတားဦးမြို့နယ်၊ စပါးတွင်းကျေးရွာ သိန်း(၂၀၀) ကုန်ကျသည့် သောက်သုံးရေတွင်း အလှူရှင်မှတ်တမ်း။
ဦးဇင်း ဦးကောဝိဒ လက်ခံရရှိထားသော အလှူငွေ စာရင်းမှတ်တမ်း- 1.အရှင်ဇ၀န မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) မှ မတည်ငွေ- ၁၀သိန်းကျပ် 2.မန္တလေးမြို့ ဒေါက်တာ လ...
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးကောက်အား ရည်စူး၍ ဒေါ်ကျင်မြင့် နှင့် သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု ။ ၃၁.၅.၂၀၁၃
သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၆ ခုကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခု ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၇) ရက် ၊ ၃၁.၅.၂၀၁၃ သောကြာနေ့ အရုဏ် ယာဂုဆွမ်းကပ်လှူခြင်းနှင့် နေ့ဆွမ်း လောင်းလှ...
ဗိုလ်မှူးကျော်ဇင် (ခ ) ဗိုလ်မှူးကီဆိုင် (ငြိမ်း) အ...
ဦးအေးညွန့် ၏ (၆၇) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူကောင်းမှု ...
ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးအားရည်စူး၍ ဦးအောင်နိုင်ဦး + ဒေ...
မသဲနှင်းအိ (စင်္ကာပူ) ၏ မွေးနေ့အလှူကောင်းမှု ၂၈.၁၂.၂...
ကိုတင်ထူးရွှေ + မသီရိအောင် (စင်္ကာပူ)တို့၏ အရုဏ်ဆွမ်း...
Dr.ကြည်စိုး+ Dr. မော်လီ မိသားစု (USA) ကောင်းမှု အလ...
မျှော်လင့်ခြင်း မိုးကောင်းကင် နှင့် စေတနာရှင် အလှူ...
ဦးကျော်မောင် + ဒေါ်မြသွေး မိသားစု (ခင်ဦးမြို့) ကေ...
ကိုစိုးမိုးမင်းဦး + မလွင်လွင်ထွန်း (စင်္ကာပူ) တို့၏...
ဦးဇော်သောင်း + ဒေါ်အေးသန်း မိသားစု (စစ်ကိုင်းမြို့...
ကိုနေမင်းထွန်း၏ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အလှူ ကောင်းမှု ...
ဖြစ်လေရာဘ၀တွင် ရောဂါကင်းဝေးနိုင်ကြစေရန်အတွက် လစဉ်တ...
"လမင်းအိမ်" စာပေနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ (မူဆယ်မြို့) ...
မမင်းမင်းခိုင် (စင်္ကာပူ) ၏ မွေးနေ့အလှူ ကောင်းမှု ၂၀...
ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင် မိသားစု(စင်္ကာပူ)၏ အရုဏ်ဆွမ...
မ၀င်းမြတ်မွန်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အလှူ။ ၁၈...
ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးသိန်းညွန့်အား ရည်စူး၍ ဇနီး-ေ...
ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် မိသားစု(ထိုင်ဝမ်) မ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပလျှက်ရှိသော မေတ္တာရှင်ဆရာတေ...
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ဦးအောင်ဗိုလ် (၁၃)နှစ်ပြည့် အားရည်စ...
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ဦးအုံးမြင့်အား ရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်လှ...
မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး(မလေးရှား)၏ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူနှင့် ...
ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးဘသော်အား ရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်လေး ...